မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား
November 12, 2017 Apann Pyay
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား??? အောက်ကစာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ…
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခံစားမှုအာရုံက လှုပ်ရှားလွယ်တယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့ ပတ်သက်လာရင်မကောင်းတဲ့ဖက် တွေးမြင်လွယ်တယ်။ သဝန်တို၊အူတိုလွယ်တယ်။ ကိုယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့အခါသူ့ကို ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်ပြီး မျှဝေခံစားမယ်၊သူဝမ်းနည်းအားငယ်တဲ့အခါ လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး အကြင်နာငွေ့တွေနဲ့ ကူညီအားပေးမယ်၊အလုပ်မသွားခင် ပုစဉ်းရေနား အနမ်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်၊ အိမ်ရောက်ရင်လည်းပြန်ရောက်ကြောင်း ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်မယ်။အဲဒီလိုကိုယ့်အတွက် အပန်းမကြီးတဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေ၊အပြုအမူတွေက မိန်းကလေးတွေအတွက် တစ်သက်လုံး တွေးတိုင်းကြည်နူးစေနိုင်ပါတယ်။
(၃) မျက်နှာထား မပြနဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒေါသမျက်နှာနဲ့တင်းပြတတ်တဲ့ ယောက်ျားလောက် ကြည့်ရဆိုးတာမရှိဘူး။ကိုယ်က အပြင်မှာ မအားမလပ် စီးပွါးရှာနေသလိုသူလည်း အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကလေးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုသတိရပေးပါ။ နောက်ကနေ လိုအပ်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူရှိလို့ အပြင်မှာ ကိုယ်စိတ်ချလက်ချ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပေးပါ။ ကိုယ်အလုပ်ကပြန်ရောက်ရင် “ မိန်းမရေ.. ပင်ပန်းနေပြီလား” နဲ့“ မပင်ပန်းပါဘူး.. အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားက ပိုပင်ပန်းတာ” ဆိုတဲ့ အပြန်အလှန်စကားပုံရိပ်တွေက လှပတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပါပဲ လူကိုကြည်နူးစေပါတယ်။
ယောက်ျားတွေက အလုပ်ပြိုင်၊ ရာထူးပြိုင်သလိုမိန်းကလေးတွေလည်း ကိုယ့်ယောက်ျား၊ကိုယ့်ကလေးအကြောင်း ပြိုင်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့် လူတွေရှေ့မှာ မိန်းကလေးတွေကိုမဟောက်၊ မအော်ဘဲ အကြင်နာတွေ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေပေးပါ။ တခြားမိန်းကလေးတွေ မနာလိုဝန်တိုဖြစ်စေလောက်တဲ့ အချစ်ကို ရထားတဲ့မင်းသမီးလို့ သူ့ကိုယ်သူထင်မြင်အောင် ကြင်နာပြပါ။ သူဟာထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်အပေါင်းသင်းရှေ့မှာလည်း ကိုယ့်ဟာ မိန်းမကိုဂရုစိုက်ကြင်နာသူအဖြင့် သူမျက်နှာသာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မိန်းမလှလေးတွေမြင်ရင် ယောက်ျားလေးတွေကြည့်တတ်ကြသလို ယောက်ျားလေးချောချောတွေကိုမြင်ရင်လည်း မိန်းကလေးတွေ ကြည့်တတ်ပါတယ်။ဒါကို သဝန်တို၊ စိတ်တိုနိုင်ပေမယ့် ချောတဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အကြည့်က ချောတဲ့မိန်းကလေးကိုကြည့်တဲ့ ကိုယ့်အကြည့်ထက်ရိုးသားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကြည့်တဲ့အကြည့်ကလှတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု၊ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ကြည့်ရှုခံစားသလိုပဲ ယောက်ျားလေးတွေလို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ မပါပါဘူး။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရိုက်တတ်တဲ့ယောက်ျားလောက် အောက်တန်းကျတာ မရှိဘူး။သူ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် အပြန်အလှန် လေးစားမှုဆိုတာရှိသင့်တယ်။ လက်မပါသင့်ဘူး။ သူ့ကိုမချစ်တော့ရင်ကိုယ့်နှလုံးသားကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။ သူ့ကိုပျော်အောင်ဆက်ထားနိုင်မလား? တကယ်လို့ မထားနိုင်ခဲ့ရင်ဆုပ်ကိုင်မထားပါနဲ့။ လက်လွတ်လိုက်ပါ၊သူလွတ်လပ်ပါစေ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်နေပါစေ ယောက်ျားတစ်ဦးရဲ့ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်မှုကို ပိုအလေးထားကြတယ်။ ဒါမှကိုယ့်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့တာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ တကယ်လို့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုက ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ လက်နက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့နူးညံ့မှုက မိန်းကလေးအတွက် အဏှမြူပဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေမှာ မွေးရာပါမိခင်စိတ်ရှိတာကြောင့် တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကိုကလေးလေးတစ်ယောက်လို အစစအရာရာစိုးရိမ်စိတ်တွေပိုပြီး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်လိုက်ပြောမယ်၊ အလိုလိုက်တတ်သလို၊ ဟိုဟာမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ လိုက်စွက်ဖက်မယ်။ ဒါတွေကို အပြစ်မမြင်ဗွေမယူ၊ ဒေါသမထွက်ဘဲ နူးညံ့ပေးပါ။ သူဟာမိခင်စိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
(၈) မိသားစုဟာ ပထမ
ယောက်ျားတွေဟာ အလုပ်ကို တာဝန်ယူရတယ်။ အလုပ်အတွက် စာရိတ္တကောင်းရတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ဖို့နဲ့ အလုပ်ရဲ့ကျေးကျွန်မဖြစ်ဖို့ သိတတ်ရတယ်။ အလုပ်လုပ်တာဟာမိသားစု ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်၊ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတွေပျော်ရွှင်ဖို့ ကိုယ်နဲ့အတူနေခွင့် အချိန်ကိုမကြာခဏပေးပါ။
(၉) ယောက္ခမဆိုတာလည်း မိဘပဲ
မိန်းမကို တကယ်ချစ်ရင် သူ့မိဘတွေကိုလည်း ချစ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ဒါကိုယ့်မိဘတွေပဲလို့ ထည့်ထားပါ။ ယောက္ခမတွေကို ကိုယ့်မိဘအရင်းလို သဘောထားနိုင်ရင်သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို သားအရင်းလို သဘောထားကြပါလိမ့်မယ်။ လူတွေက အသက်ကြီး အိုမင်းလာရင်ကလေးလေးနဲ့ တူသွားတတ်သတဲ့။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့တစ်ခြား အိုမင်းလာတဲ့ ယောက္ခမ၊ မိဘတွေကိုကလေးတစ်ယောက် သဘောထားပြီး ဂရုစိုက်ပါ၊ပြုစုပါ။ သူတို့ပျော်ရွှင်အောင် ချော့မြူပါ။ ကိုယ်လဲတစ်နေ့နေ့မှာ အိုမင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြည့်မှန်တစ်ချပ်ကို ပြုလုပ်နေသလိုပဲကိုယ့်သားသမီးတွေ အတုယူနိုင်ဖို့ လူအိုတွေကိုဘယ်လိုဂရုစိုက် လေးစားရမယ်ဆိုတာကို သူတို့သိမြင်ပါစေ။ ဒါမှ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကို သူတို့ပြန်လေးစားပါလိမ့်မယ်။
(၁ဝ) သစ္စာ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်း
လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ဖို့ ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကိစ္စတိုင်းကို ဖွင့်ပြော တိုင်ပင်သင့်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေ မတတ်သာတဲ့အချိန်မှာ ချိုသာတဲ့မုသားကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင် မိန်းကလေးကို အပြစ်မတင်ခင်ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ အတိမ်၊ အနက်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုပြီး ရှုထောင့် အဖက်ဖက်ကနေ အရင်ကြည့်ရှုခံစားပေးပါ။ မိန်းကလေးဖက်ကနေ ဝင်ရောက်ခံစားတတ်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဟာ သူ့ရဲ့အချစ်ရဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို နားလည်ပေးပါ။ အားပေးပါ။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
မိနျးကလေးတှရေဲ့ စိတျကို ဖောကျထှငျး မွငျခငျြပါသလား??? အောကျကစာကို ဆကျဖတျကွညျ့ပါ…
“သူ့မိနျးမက အိမျထောငျမှု ဘယျလောကျထိနျးနိုငျတယျ၊ သူ့ခဈြသူက ဘယျလိုကွငျနာတတျတယျ”လို့ ကိုယျ့မိနျးမ၊ ကိုယျ့ခဈြသူကို တခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ မနှိုငျးနဲ့။ ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ အတူနခှေငျ့ရတာ မင်ျဂလာတဈပါးပါ။ မိနျးကလေးအမြားက ကိုယျခဈြတဲ့လူဆီက ကွားရတဲ့ ခြီးကြူးစကားတဈခှနျးကို အခွားလူတှဆေီက ကွားရတဲ့ ခြီးကြူးစကားတှထေကျ ပိုတနျဖိုးထားပါတယျ။
မိနျးကလေးတှရေဲ့ ခံစားမှုအာရုံက လှုပျရှားလှယျတယျ။ ကိုယျခဈြတဲ့လူနဲ့ ပတျသကျလာရငျမကောငျးတဲ့ဖကျ တှေးမွငျလှယျတယျ။ သဝနျတို၊အူတိုလှယျတယျ။ ကိုယျအခကျအခဲကွုံတဲ့အခါသူ့ကို ဖှငျ့ပွောတိုငျပငျပွီး မြှဝခေံစားမယျ၊သူဝမျးနညျးအားငယျတဲ့အခါ လကျကို တငျးတငျးဆုပျကိုငျပွီး အကွငျနာငှတှေ့နေဲ့ ကူညီအားပေးမယျ၊အလုပျမသှားခငျ ပုစဉျးရနေား အနမျးလေးနဲ့နှုတျဆကျမယျ၊ အိမျရောကျရငျလညျးပွနျရောကျကွောငျး ပှဖေ့ကျနှုတျဆကျမယျ။အဲဒီလိုကိုယျ့အတှကျ အပနျးမကွီးတဲ့ နှုတျဆကျခွငျးတှေ၊အပွုအမူတှကေ မိနျးကလေးတှအေတှကျ တဈသကျလုံး တှေးတိုငျးကွညျနူးစနေိုငျပါတယျ။
(၃) မကျြနှာထား မပွနဲ့
မိနျးကလေးတဈယောကျကို ဒေါသမကျြနှာနဲ့တငျးပွတတျတဲ့ ယောကျြားလောကျ ကွညျ့ရဆိုးတာမရှိဘူး။ကိုယျက အပွငျမှာ မအားမလပျ စီးပှါးရှာနသေလိုသူလညျး အိမျမှုကိစ်စ၊ ကလေးတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနတေယျဆိုသတိရပေးပါ။ နောကျကနေ လိုအပျသမြှ ဖွညျ့ဆညျးပေးတဲ့သူရှိလို့ အပွငျမှာ ကိုယျစိတျခလြကျခြ အလုပျလုပျနိုငျတယျဆိုတာ သတိရပေးပါ။ ကိုယျအလုပျကပွနျရောကျရငျ “ မိနျးမရေ.. ပငျပနျးနပွေီလား” နဲ့“ မပငျပနျးပါဘူး.. အပွငျထှကျ အလုပျလုပျတဲ့ယောကျြားက ပိုပငျပနျးတာ” ဆိုတဲ့ အပွနျအလှနျစကားပုံရိပျတှကေ လှပတဲ့ပနျးခြီကားတဈခပျြလိုပါပဲ လူကိုကွညျနူးစပေါတယျ။
ယောကျြားတှကေ အလုပျပွိုငျ၊ ရာထူးပွိုငျသလိုမိနျးကလေးတှလေညျး ကိုယျ့ယောကျြား၊ကိုယျ့ကလေးအကွောငျး ပွိုငျတတျကွတယျ။ဒါကွောငျ့ လူတှရှေမှေ့ာ မိနျးကလေးတှကေိုမဟောကျ၊ မအျောဘဲ အကွငျနာတှေ၊ ဂရုစိုကျမှုတှပေေးပါ။ တခွားမိနျးကလေးတှေ မနာလိုဝနျတိုဖွဈစလေောကျတဲ့ အခဈြကို ရထားတဲ့မငျးသမီးလို့ သူ့ကိုယျသူထငျမွငျအောငျ ကွငျနာပွပါ။ သူဟာထကျမွကျတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈခဲ့ရငျ ကိုယျ့အပေါငျးသငျးရှမှေ့ာလညျး ကိုယျ့ဟာ မိနျးမကိုဂရုစိုကျကွငျနာသူအဖွငျ့ သူမကျြနှာသာပွနျပေးပါလိမျ့မယျ။
မိနျးမလှလေးတှမွေငျရငျ ယောကျြားလေးတှကွေညျ့တတျကွသလို ယောကျြားလေးခြောခြောတှကေိုမွငျရငျလညျး မိနျးကလေးတှေ ကွညျ့တတျပါတယျ။ဒါကို သဝနျတို၊ စိတျတိုနိုငျပမေယျ့ ခြောတဲ့ယောကျြားကိုကွညျ့တဲ့ မိနျးကလေးရဲ့အကွညျ့က ခြောတဲ့မိနျးကလေးကိုကွညျ့တဲ့ ကိုယျ့အကွညျ့ထကျရိုးသားပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ကွညျ့တဲ့အကွညျ့ကလှတဲ့ပစ်စညျးတဈခု၊ ပနျးခြီကားတဈခပျြကို ကွညျ့ရှုခံစားသလိုပဲ ယောကျြားလေးတှလေို ကွညျ့ပွီး စိတျကူးယဉျတာတှေ မပါပါဘူး။
မိနျးကလေးတဈယောကျကို ရိုကျတတျတဲ့ယောကျြားလောကျ အောကျတနျးကတြာ မရှိဘူး။သူ့ကိုတကယျခဈြရငျ အပွနျအလှနျ လေးစားမှုဆိုတာရှိသငျ့တယျ။ လကျမပါသငျ့ဘူး။ သူ့ကိုမခဈြတော့ရငျကိုယျ့နှလုံးသားကို ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ သူ့ကိုပြျောအောငျဆကျထားနိုငျမလား? တကယျလို့ မထားနိုငျခဲ့ရငျဆုပျကိုငျမထားပါနဲ့။ လကျလှတျလိုကျပါ၊သူလှတျလပျပါစေ။
မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ ဘယျလောကျပဲထကျမွကျနပေါစေ ယောကျြားတဈဦးရဲ့ ဦးဆောငျဆုံးဖွတျမှုကို ပိုအလေးထားကွတယျ။ ဒါမှကိုယျ့အတှကျ ဘေးကငျးလုံခွုံတယျလို့ ထငျတတျကွတယျ။ မိနျးမတှဟော ယောကျြားတှရေဲ့ နူးညံ့သိမျမှတေ့ာကိုမလှနျဆနျနိုငျဘူး။ တကယျလို့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့နူးညံ့သိမျမှမှေု့က ယောကျြားတဈယောကျကိုရငျဆိုငျဖို့ လကျနကျဖွဈခဲ့တယျဆိုရငျ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့နူးညံ့မှုက မိနျးကလေးအတှကျ အဏှမွူပဲဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတှမှော မှေးရာပါမိခငျစိတျရှိတာကွောငျ့ တဈခါတလေ ကိုယျ့ကိုကလေးလေးတဈယောကျလို အစစအရာရာစိုးရိမျစိတျတှပေိုပွီး ဗဈြတောကျဗဈြတောကျလိုကျပွောမယျ၊ အလိုလိုကျတတျသလို၊ ဟိုဟာမလုပျနဲ့ဒီလိုလုပျလို့ လိုကျစှကျဖကျမယျ။ ဒါတှကေို အပွဈမမွငျဗှမေယူ၊ ဒေါသမထှကျဘဲ နူးညံ့ပေးပါ။ သူဟာမိခငျစိတျရှိတဲ့ မိနျးမသားဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ယောကျြားတှဟော အလုပျကို တာဝနျယူရတယျ။ အလုပျအတှကျ စာရိတ်တကောငျးရတယျ။ အလုပျထဲမှာ ပြျောရှငျအောငျနတေတျဖို့နဲ့ အလုပျရဲ့ကြေးကြှနျမဖွဈဖို့ သိတတျရတယျ။ အလုပျလုပျတာဟာမိသားစု ပြျောရှငျဖို့အတှကျ၊ မိသားစု စားဝတျနရေေးအတှကျဆိုရငျ ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ ကိုယျ့သားသမီးတှပြေျောရှငျဖို့ ကိုယျနဲ့အတူနခှေငျ့ အခြိနျကိုမကွာခဏပေးပါ။
(၉) ယောက်ခမဆိုတာလညျး မိဘပဲ
မိနျးမကို တကယျခဈြရငျ သူ့မိဘတှကေိုလညျး ခဈြပါ။ စိတျထဲမှာ ဒါကိုယျ့မိဘတှပေဲလို့ ထညျ့ထားပါ။ ယောက်ခမတှကေို ကိုယျ့မိဘအရငျးလို သဘောထားနိုငျရငျသူတို့ကလညျး ကိုယျ့ကို သားအရငျးလို သဘောထားကွပါလိမျ့မယျ။ လူတှကေ အသကျကွီး အိုမငျးလာရငျကလေးလေးနဲ့ တူသှားတတျသတဲ့။ ဒါကွောငျ့တဈနတေ့ဈခွား အိုမငျးလာတဲ့ ယောက်ခမ၊ မိဘတှကေိုကလေးတဈယောကျ သဘောထားပွီး ဂရုစိုကျပါ၊ပွုစုပါ။ သူတို့ပြျောရှငျအောငျ ခြော့မွူပါ။ ကိုယျလဲတဈနနေ့မှေ့ာ အိုမငျးလာနိုငျတဲ့အတှကျကွညျ့မှနျတဈခပျြကို ပွုလုပျနသေလိုပဲကိုယျ့သားသမီးတှေ အတုယူနိုငျဖို့ လူအိုတှကေိုဘယျလိုဂရုစိုကျ လေးစားရမယျဆိုတာကို သူတို့သိမွငျပါစေ။ ဒါမှ နောငျတဈခြိနျမှာ ကိုယျ့ကို သူတို့ပွနျလေးစားပါလိမျ့မယျ။
(၁ဝ) သစ်စာ၊ ယုံကွညျခွငျး၊ ခှငျ့လှတျခွငျး၊ နားလညျခွငျး
လူနှဈယောကျပေါငျးစပျဖို့ ဒါတှလေိုအပျပါတယျ။ ကိစ်စတိုငျးကို ဖှငျ့ပွော တိုငျပငျသငျ့တယျဆိုပမေယျ့ တဈခါတလေ မတတျသာတဲ့အခြိနျမှာ ခြိုသာတဲ့မုသားကိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ ပွဿနာတဈခုခုရငျဆိုငျရပွီဆိုရငျ မိနျးကလေးကို အပွဈမတငျခငျကိစ်စတဈခုရဲ့ အတိမျ၊ အနကျကို ဝဖေနျပိုငျးခွားတတျဖို့လိုပွီး ရှုထောငျ့ အဖကျဖကျကနေ အရငျကွညျ့ရှုခံစားပေးပါ။ မိနျးကလေးဖကျကနေ ဝငျရောကျခံစားတတျဖို့လညျး လိုပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျဟာ သူ့ရဲ့အခဈြရဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ကို နားလညျပေးပါ။ အားပေးပါ။ ခှငျ့လှတျပေးပါ။
သင့် တစ်အိမ်လုံး၊ သင့်အိမ်အခန်းတွင်းမှာ အနံ့ဆိုးတစ်ခုခု (သို့) အပုပ်နံ့တွေရှိနေပါက ဒီလို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းလိုက်ပါ
လုပ်ရက်လိုက်ကြတာနော်.. ဒီလိုမျိုးခံရတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်များတောင် ရှိနေလိုက်မလဲဗျာ